FBI-da Maraykanka oo baadi-goobaysa Haweeney u dhalatay Urdun. | Puntlander.com
← Burcad-baddeed codsatay madax-furasho lagu sii daynayo Markabkii Shidaalka ee ku soo wajahnaa Dekedda Muqdisho
Dowladaha Carabta oo loogu baaqay inay Gurmad gaarsiiyaan dadka ku macluulsan Somalia →
FBI-da Maraykanka oo baadi-goobaysa Haweeney u dhalatay Urdun.
Hay’adda Dembi-baarista Federalka Maraykanka ee FBI-da ayaa shaaciyey inay ku raad-joogaan Haweeneydaasi oo lagu magacaabo Axlaam Cariif Axmed Al-tamiimi, taasi oo loo haysto Is-qarxin sannadkii 2001-dii ka dhacday magaalladda Quddus-ta La-haysto,oo ay 15-qof ku geeriyootay, halka 120-kalena ku dhaawacantay..
Haweeneydaasi oo ay Askarta Yuhuudda qabteen sannadkii 2003-dii waxay qiratay Dembigaasi, waxaana lagu xukumay Xabsi 16-sanno ah.
Axlaam Cariif Axmed Al-tamiimi oo ahayd Saxafiyad ka hawlgasha Telefishin ku yaalla Dhulalka la-haysto ee Falastiin waxaa Xabsiga laga sii daayey Heshiis ay Milliteriga Yuhuudda iyo Ururka XAMAAS isku dhaafsadeen Maxaabiis sannadkii 2011-kii, waxayna markii la sii daayey dib ugu laabatay dalkeeda hooyo
Dhinaca kale,Dastuurka Urdun ayaan oggolayn in Muwaadiniintooda loo gacan-gelyo dal shisheeye, si loogu maxkamadeeyo.
Haddii ay Maraykanka gacanta ku dhigaan Haweeneydaasi waxay muteysan kartaa dil ama Xabsi Daa’im.